विश्वकपकाे उद्घाटन खेल अघि रूस र साउदीका खेलाडी के गर्दै छन् ? (फाेटाे फिचर) – Nepal Journal
विश्वकपकाे उद्घाटन खेल अघि रूस र साउदीका खेलाडी के गर्दै छन् ? (फाेटाे फिचर)
Posted By: Nepal Journal June 14, 2018 | ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १६:३७
मस्काे । रूसकाे राजधानी मस्काेस्थित लुजनिकि रंगशालामा २१ अाैं संस्करणकाे विश्वकप फुटबल केहीबेरमा सुरू हुंदैछ । प्रतियाेगिताकाे उद्घाटन खेलमा अायाेजक रूसमा र साउदी अरेबियन एक अर्काेबिरूद्ध अामने सामुने हुंदैछन् ।
यस अघि दुबै समूहका खेलाडीले भिन्दा भिन्दै समयमा वार्मअपमा निस्किए । प्रतियाेगिता हुने रंगशालामा उनीहरूले अाफ्नाे प्रशिक्षकसहित वार्मअप गरे । प्रतियाेगिताकाे पहिलाे खेलमा स्वभाविक रूपले धेरै दर्शककाे अार्कषण हुने गर्दछ ।
पहिलाे प्रतियाेगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने टिमकाे खेल मात्रै नभर्इ अायाेजककाे दक्षाता पिन प्रस्तुत हुने भएकाले धेरैकाे अाखा यतिबेला लुजनिकि रंगशालातर्फ साेझिएकाे छ। तर जारी विश्वकपमा यि पहिलाे प्रतिस्पर्धीलार्इ कमजाेर प्रतिप्रर्धीकाे रूपमा चित्रण गरिएकाे छ ।
Be the first to comment on "विश्वकपकाे उद्घाटन खेल अघि रूस र साउदीका खेलाडी के गर्दै छन् ? (फाेटाे फिचर)"